Music | Delo Delo
Goodbye Lullaby (AVRIL LAVIGNE)	Posted on October 16, 2011 | No Comments
ဂီတအမျိုးအစား – Rock, Pop လူကြိုက်များသည့် သီချင်းများ – 1.What The Hell, 2. Smile, 3. I Love You, 4. Wish You Were Here, 5. Stop Standing There, 6. Goodbye, 7. Alice ဒီက...	Continue Reading...	လေဒီဂါဂါရဲ့ အယ်လ်ဘမ် အသစ် “Born This Way”	Posted on June 1, 2011 | No Comments
အခု ဂီတဈေးကွက် အတွင်း အလျံပယ် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် လာတာက လေဒီဂါဂါရဲ့ Born This Way စီးရီးပါ။ ဒီသီချင်းတွေကို နားဆင်ကြည့်ရင် စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှု၊ စိတ်ဒုက္ခရဲ့ သရုပ်တွေကို ပေါ်လွင်အောင် ညွှန်းဆို ထားနိုင်တယ် လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီ သုံးနှစ်အတွင်း မနားမနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ လေဒီဂါဂါရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု ရလာဒ် တော်တော်...	Continue Reading...	“Americn Idol” 10th Season ၏ အောင်နိုင်သူ Scotty McCreery	Posted on May 26, 2011 | No Comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကျင်းပခဲ့သော မျက်နှာသစ် ကန်းထရီးတေးသီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ “American Idol” တွင် Scotty McCreery သည် ပြိုင်ဘက် Lauren Alaina ကိုကျော်ဖြတ်၍ ကြည့်ရှုသူ မဲအရေအတွက် ၁၂၂ သန်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်ကို ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်…ကိုယ်တော်က ဒီကိုရောက်ရှိစေခဲ့လို့ပါ” ဟု ၁၇ နှစ်အရွယ် Scotty McCreery က...	Continue Reading...	နစ်ကိုး(လ်)ရှာဇင်းဂါးက X-Factor တင်ဆက်မည်	Posted on May 26, 2011 | No Comments
မိန်းကလေး ဂီတအဖွဲ့Pussycat Dolls ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော်ဟောင်း “နစ်ကိုး(လ်)ရှာဇင်းဂါး” ဟာ အဆိုပြိုင်ပွဲ ရုပ်သံအစီအစဉ် X-Factor ကို ပူးတွဲတင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း Fox ရုပ်သံလိုင်းက (၇-၅-၁၁) နေ့က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ American Idol အစီအစဉ်ရဲ့ အကဲဖြတ် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ ပေါ်လာအဗ္ဗဒူး(လ်)ဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲ အကဲဖြတ် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ဖို့ စာချုပ်...	Continue Reading...	သမီးတစ်ယောက်အဖေဖြစ်လာတဲ့ ဘရိုင်ယင်အက်ဒမ်(စ်)	Posted on May 26, 2011 | No Comments
အမေရိကန် ရော့(ခ်) ဂီတ အဆိုတော် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ဘရိုင်ယင်အက်ဒမ်(စ်)နဲ့ ၎င်းရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်း ပူးတွဲတည်ထောင်သူ “အယ်လစ်ရှားဂရင်မော(လ်)ဒီး” တို့ဟာ ယခင်လက သမီး ရတနာလေး တစ်ပါး ရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်က People မဂ္ဂဇင်းကို (၇-၅-၁၁) နေ့က အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။ “ကျွန်တော့် သမီးလေး မီရာဘဲ(လ်)ဘန်နီကို (၂၂-၄-၁၁) နေ့က မွေးဖွားတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာအားရ ကြေညာအပ်ပါတယ်”...	Continue Reading...	အရေးနှင့် အဆို အောင်မြင်မှုချိုချို	Posted on May 26, 2011 | No Comments
တေးသီချင်းတစ်ပုဒ် ပေါက်ရင်ဖြင့် လူငယ်ထုရဲ့ ပါးစပ်ဖျား၊ ဒါမှမဟုတ် အချစ်သီချင်း ချိုချိုလေးတွေ ဆိုရင်ဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ ဂစ်တာဝိုင်းတွေမှာ ကြားရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အောင်မြင်တဲ့ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးသူ တေးရေးဆရာနဲ့ အသက်သွင်းသူ တေးဆိုတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် ခံစားချက်လေးတွေကို တေးသီချင်းချိုချို အောင်မြင်မှုချိုချိုဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးကနေ တင်ဆက်ဖို့ စီစဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 8 DAYS...	Continue Reading...	တွယ်တာ တမ်းတမ်းတတ တတဲ့တေး	Posted on May 23, 2011 | No Comments
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းသစ်များနဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ တွယ်တာရဲ့ တွယ်တာ တေးစီးရီး မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့က Central Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားမှာ တေးရေး ခိုင်မြဲသာ၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ဒါရိုက်တာ အေးဇော်မိုး(စက်မှု)၊ ဒေါ်ခင်မာဆွေ၊ ဆရာအောင်စိုးသူနှင့် တွယ်တာတို့မှ အမှတ်တရ စကားများကို ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ တေးစီးရီး CD နှင့်...	Continue Reading...	LatestFeaturedCommentsTags	Zac Efron ပါဝင်သည့် Are We Officially Dating? ဇာတ်ကားသစ် ၂၀၁၄ နှစ်ဦးတွင် ရုံတင်မည်
18 June 2013 11:35 AM | No Comments
The Amazing Spider-Man3နဲ့4ရဲ့ ရုံတင်ရက် ကြေညာ
18 June 2013 10:35 AM | No Comments
18 June 2013 9:49 AM | No Comments
ဇွန်လအတွက် စံချိန်သစ်တင်သွားတဲ့ Man of Steel
17 June 2013 9:52 AM | No Comments
The Wolf of Wall Street နိုဝင်ဘာတွင် ရုံတင်မည်
17 June 2013 9:20 AM | No Comments
Girls’ Generation အဖွဲ့ရဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ် စတင်ပြီ
15 June 2013 11:13 AM | No Comments
Kingdom Hearts III နှင့် Final Fantasy XV အကြောင်း Square Enix ဖွင့်ဟ ကြေညာ
12 June 2013 10:08 AM | No Comments
11 June 2013 1:04 PM | No Comments
ဝန်ရိုးစွန်းမှာ ဗလာပြလေတော့မလား Kate Upton | Delo Deloအန္တာတိတ်ဒေသမှာ ဘီကီနီနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံခဲ့တဲ့ ကိတ်အပ်တန်ဟေမာန်သော်တာညိမ်း ၂ | Delo Deloအခွင့်အရေးပေးရင်လည်း အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဟေမာန်ဟေမာန်သော်တာညိမ်း | Delo Deloအခွင့်အရေးပေးရင်လည်း အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဟေမာန်Delo Delo newsတက်ကြွနုပျိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုး ရချင်ရင် စိုင်းစိုင်းနဲ့တော့ သီချင်းမဆိုဘူး၊ ငယ်တဲ့လူနဲ့ပဲ ဆိုမှာပေါ့ – ငယ်ငယ်Delo Delo newsလမ်းမှာ ကျောင်းသားလေးတွေကိုတွေ့ရင် သတိရတယ်။ ငယ်တုန်းက လူကြီးဖြစ်ချင်ပြီး ခုကျတော့ ပြန်ငယ်ချင်တယ် – ကျော်ထွဋ်ဆွေ2PM
Hayman Thawdar Nyeim
The Chic Magazine
Yin Nwe Oo
မြင့်မြတ်	Photo Album	Kyoko Fukada: Blue Moon
06 June 2013 9:44 AM | No Comments
Isabey ရဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နွေဦးဖက်ရှင်မော်ဒယ် ကင်ထယ်ဟီး
28 March 2013 12:24 PM | No Comments
03 January 2013 12:06 PM | No Comments
03 January 2013 8:15 AM | No Comments
ရုံတင်နေသည့် ဇာတ်ကားများ -	ရန်ကုန်
သမ္မတ ၊ သွင် ၊ မင်္ဂလာ - “ဥ”
- Ek Tha Tiger
- မှော်ရုံဒေဝါ အလန်းဖူးစာ
မြို့မ - “ဥ”
ဝင်းလိုက် - “ဥ”
ဒီလို ဒီလို …	Free Myanmar Lyrics	Online Users
: Visitors -
Design by DeloLay
Copyright Delo Delo. All Rights Reserved.